ungayikhubaza njani iknockon (cofa kabini ukuvusa) kwi-lg g3 kunye nezinye iifowuni ze-lg ze-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayikhubaza njani iKnockON (cofa kabini ukuvuka) kwi-LG G3 kunye nezinye iifowuni ze-LG ze-Android
Akukho fowuni ifezekileyo. Ukusuka kwiifowuni ezisisiseko kwiifowuni ezikwiqondo eliphezulu, zonke zinesiphene. I-LG G3, ngelixa yenye yeefowuni eziphambili esizihlaziye ngo-2014, ayisiyiyo. Uyabona, umenzi wayo ulayishe into ebizwa ngokuba yiKnockON, evumela umntu ukuba avuse okanye atshixe ifowuni ngokuthepha kabini kwiscreen sayo. Iiposisi luphawu olukrelekrele nolulungeleyo ... ixesha elininzi.
Kodwa kwabanye bethu, iKnockON ayisebenzi ngokungagungqiyo njengoko kufanelekile. Ngamaxesha anqabileyo, inqaku libangelwa ngengozi ngelixa ifowuni isesingxoweni okanye epokothweni, enokuthi ikhokelele kuyo nayiphi na into ephuma kubhetri ukuya kufowunelwa epokothweni. Isisombululo esinokubakho kumcimbi kukukhubaza iKnockON ngesandla. Ukwenza oko, nangona kunjalo, akunakuba yinkqubo ethe ngqo-phambili kuba ukhetho lokwenza njalo alukho kwimenyu yokuseta yonke into eyahlukileyo ye-LG G3. Kwifowuni yokwakha isoftware yangoku, utshintsho lweKnockON kunye neapos lungabekwa kwimenyu efihliweyo endaweni yoko.
Umfanekiso:1ye3Ukukhubaza i-LG G3 & apos; impompo kabini ukuvusa umsebenzi, kuya kufuneka ufikelele kwimenyu yenkonzo yefowuni, eyenziwa ngokufaka ikhowudi kwi-app yayo yokucofa. Icandelo elikhohlisayo kukuba le khowudi iyimfihlo iyahluka phakathi kweemodeli ze-LG G3. Umzekelo, ikhowudi ngu-3845 # * 855 # ngokwahluka kwesixhobo (imodeli D855), ngelixa imodeli ye-AT & T & apos; (D850) ifuna ikhowudi 3845 # * 850 # engenisiweyo.
Nokuba yeyiphi na imodeli ye-LG G3 onayo, zama ukufaka i-3845 # * XXX # apho i-XXX ingamanani avela kwifowuni yakho ye-LG kunye neapos; Ke ukuba uthenge i-LG G3 yakho kwi-T-Mobile, kuya kufuneka ufake i-3845 # * 851 # njenge-D851 lelona gama likhethiweyo kunye neapos;
Usebenzisa ifomula efanayo, kuya kufuneka ubenakho ukufikelela kwimenyu yenkonzo kwezinye iifowuni ze-Android ze-LG, ukuba nje uyazi igama lemodeli kunye neapos. I-Verizon & apos ye-LG G3 kuphela kwento esiyaziyo njengoko isebenza ngekhowudi ## 228378 + thumela.
Kanye kwimenyu yenkonzo, skrolela ezantsi ude ufumane 'uKnock on / off setting'. Kwimeko yethu, yayiyeyona nto yokugqibela kuluhlu. Thepha kwaye uza kunikwa ukufikelela kutshintsho olukhubaza iKnockON. Kwaye yiloo & ampos; yiyo! Ukuba ukhe uvakalelwe kukuba ujika inqaku le-tap-to-wake kwakhona, landela amanyathelo afanayo.
Iingcebiso kunye namacebo e-LG G3:
ifowuni yeqakamba eneyona khamera intle
I-Verizon ayisacwangcisi ukubiza imali engaphezulu kwenkonzo ye-5G nangaliphi na ixesha kungekudala
Ixabiso le-Apple iPhone 7 kunye ne-7 Plus kunye nomhla wokukhutshwa kwiVerizon, T-Mobile, Sprint kunye ne-AT & T.
I-Apple iPhone XS kunye neXS Max ukukhawulezisa ukutshaja ngokukhawuleza xa kuthelekiswa: Umgangatho vs i-iPad vs MacBook tshaja
Ii-iPads ezintsha zinyanisekile nge-RAM yazo ... kwaye zininzi! Yintoni iApple yokupheka?